Waddanka Imaaraadka Iyo Airportka Berbera: Sidee Ayay Danta Guud Ee Qaranka Ugu Jirtaa. Amb.Rashid Garuf |
Waddanka Imaaraadka Iyo Airportka Berbera: Sidee Ayay Danta Guud Ee Qaranka Ugu Jirtaa. Amb.Rashid Garuf
Akhristow waxan maqaalkan kugula wadaagayaa inaan ku tusaaleeyosida danta qaranku ugu jirto in aynu ka kirayno dawlada Imaaraadka Airportka Berbera. Si marka aad aragto kuwa ka soo horjeeda aad u kala garato inay yihiin kuwo been sheegaya oo shakhsi nacayb ku jiro, kuwo been sheegaya oo siyaasad uga dan leh, iyo qaar saddexaad oo aqoon la’aani hayso oo dacaayada run mooda oo sii sheega.
Siyasada Arrimaha Dibada ee MadaxwayneSilaanyo waxa ka mida in qaranka Somaliland yeeshowaddamo badan oo aynu nahay saaxiib oo kala jooga Africa (sida Ethiopia), Carabta (sida Imaaraadka), iyo dawladaha reer Galbeedkaba (sida Ingiriiska). Maanta heshiiskan Airporka Berbera wuxu inoo samaynayaa saaxiib cusub oo aynu ku yeelano waddamada Carabta. Taas oo aan hore inoogu suurto gelin 25kii sannadood ee qarankeenu jiray.
Waxan kor ku soo sheegay in Ethiopia tahay saaxiibkeena ugu culus. Waxan arkhristoow ku xasuusinayaa bishii April 1988kii, iyada oo saaxiibka ugu culus ee SNM lahayd uu ahaa Ethiopia, ayay maalin keliya Ethiopia danteedii ka dhex aragtay inay Somalia la heshiiso, sidii aad ogayd ama aad maqashay waa tii subax qudha Ethiopia u yeedhay Madaxwayne Ahmed Silanyo oo markaa ahaa Chairmanka SNM oo ku tidhi gudaha Ethiopia soo gala, dagaal dambe oo aad Somalia ku qaadaysaana ma jiro ee halkaasu ku joogsaday. Waxan uga jeedaa saaxiibtimada siyaasada iyo diblomaasiyada wax xukuma danta labada wadan kala leeyihiin. Somaliland arrinkaa April 1988kii dhacay wuxu ina baray cashar aad iyo aadqaali inoogu ah, kaas oo ah inaynu mar walba xasuusnaano saaxiibtimadeena Ethiopia waa mid ku salaysan danta labada wadan kala leeyihiin. Iyagana maanta dantooda ku jirta inay inala saaxiibaan inagana danteenaa ku jirta. Mid ay axsaan aynu isugu samaynayno maaha. Ninka reer Somaliland ee caabaadaaya ee leh Ethiopia ayaa inaga tegaysa, waa qof aan isku kalsoonayn oo garanaynin in Ethiopia danteeda inoogula joogto ee aanay saaxiibtinimo inoogula joogin, inagana ay sidaasoo kale aynu nahay oo danta aynu ku qabno aynu kula joogno. Saaxiibtinimada cusub ee aynu maanta la yeelanayno Imaaraadka waxay dawo ka tahay in aanay mar kale inagu dhicin wixii inagu dhacay April 1988, oo hadii isha keliya inaga bakhtido aynu lahaano il labaad iyo mid saddexaadoo aynu isku halayno haddii taasu inagu dhacdo mar dambe.